Ukuxhasa intswela-ngqesho ngendlela eyiyo: yintoni kwaye yintoni iimfuno kunye neenkqubo | Ezezimali
Khawufane ucinge ukuba awuphangeli. Ngethamsanqa, unesibonelelo sokungabikho kwemisebenzi, intswela-ngqesho, ekuvumela ukuba ungakhathazeki kakhulu ekupheleni kwenyanga kuba imali ingena endlwini. Nangona kunjalo, unayo iprojekthi ongathanda ukuyqala, kwaye ekuphela kwento oswelekileyo yimali. Ke kutheni ungasebenzisi imali ngokungabikho kwemisebenzi?
Olu luvo lungaqhelekanga lusetyenziswa ngakumbi ngabantu abaninzi abangaphangeliyo abagqiba ekubeni batyale imali yokuhlawula ekwenzeni inkampani okanye ishishini elinokufumana ngaphezulu kodwa, Kubhekisa ngantoni ukungaphangeli kubhekisa phi? Ingenziwa njani? Zeziphi izibonelelo kunye nokungalunganga onako? Konke oku nokunye okuninzi esinokuthetha ngako apha ngezantsi.
1 Yintoni eyenza ukuba intswela-ngqesho ibe yeyona ibalulekileyo
2 Ngubani onokucela ukuxhasa ukungabikho kwemisebenzi
3 Izibonelelo zokongeza ukungaphangeli
4 Iindidi zongxowankulu
5 Uyenza njani imali kwintswela-ngqesho
Yintoni eyenza ukuba intswela-ngqesho ibe yeyona ibalulekileyo
Ukuxhasa abantu abangasebenziyo kwaziwa njenge ukuhlawulwa ngexesha elinye okanye ukudityaniswa kokungaqeshwa. Yinto eyenziwa ngabantu abaqokelela isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi, kwaye bafuna ukuqala umsebenzi ngokwabo, banokucela ukuba bahlawulwe, ngexesha elinye, yonke okanye inxalenye yesibonelelo sokungabikho kwemisebenzi esisele siqokelelwe.
Ngamanye amagama, i-SEPE ukuqhubela phambili imali yesibonelelo sokungabikho kwemisebenzi esele ifunyenwe kwintlawulo enye, ngohlobo lokuba kufumaneke imali eyinkunkuma ekufuneka isetyenziselwe ukuqala ishishini eliza kumiliselwa.
Kule nkcazo, kuya kufuneka ucacise amanqaku aliqela:
Kuya kufuneka ubhalise njengomntu ozimeleyo. Ngapha koko, ukwenza imali kwintswela-ngqesho kuthetha ukuba uza kuqala ishishini lakho, kwaye ngenxa yoku kufuneka ubhalise kwiRETA (iRegime ekhethekileyo yaBasebenzi abaziQeshileyo). Olunye ukhetho kukuba ulilungu lobambiswano olunqunyelweyo okanye iqabane elisebenzayo, nokuba ungumbambiswano okanye intsebenziswano yabasebenzi.
Le ntlawulo yexesha elinye kufuneka isetyenziselwe ukutyala imali kwishishini (Ngandlela thile iba likomkhulu lenkampani).
Ngubani onokucela ukuxhasa ukungabikho kwemisebenzi
Ngokucacileyo, abantu abanokucela ukuba baxhase ukungabikho kwemisebenzi ngabo bafumana izibonelelo zentswela-ngqesho (Oko kukuthi, baqokelela izibonelelo zokungaqeshwa). Nangona kunjalo, esi sibonelelo sokungaphangeli akufuneki sibhidaniswe nesibonelelo sokungaphangeli. Kule meko, ungayenza kuphela xa ufumana isibonelelo esixhasayo.
Ukongeza, olunye uthotho lwe iimfuno kulowo uzifunayo, ezinje:
Ukuba ixesha lesibonelelo ubuncinci iinyanga ezintathu ukusuka kwisicelo sakho.
Ayibhaliswanga kunye noKhuseleko lweNtlalo.
Ngaphandle kokuxhamla kwintlawulo enye ngaphambili (babeka umda weminyaka emine, oko kukuthi, yonke iminyaka emine ungayifumana).
Ngqina ukuba ubhalisiwe njenge-freelancer okanye njengeqabane elisebenzayo.
Khange akuphikise ukugxothwa. Ukuba unayo, ngekhe ubenakho ukwenza imali kugwayimbo kude kube kusonjululwe umceli mngeni.
Izibonelelo zokongeza ukungaphangeli
Ngoku ukuba uyazi ukuba kuyintoni ukwenza intlawulo ibe nkulu, ukwenza isigqibo sokwenza okanye ukungayi kuxhomekeka kwizinto ezininzi, nakwimeko ozifumana ukuyo.
Ke ngoko, phakathi kwezibonelelo zokwenza imali ngo:
Amandla okuqokelela yonke into ngaxeshanye. Ngale ndlela, awunyanzelekanga ukuba ulinde ukufumana imali kwaye ube nakho ukwenza iiprojekthi onazo, kodwa baqhubela phambili imali yentswela-ngqesho ukuze ukwazi ukuqhubeka ngokukhawuleza. Ewe kunjalo, khumbula ukuba xa sele uceliwe, ayikhawulezi, kodwa kudlula inyanga.
Unokukhetha ukuba ungayifumana njani. Ngamanye amagama, yamkele yonke ngaxeshanye okanye ngenyanga (ngalo ndlela kuncitshiswe iindleko zenkxaso).
Yonke into elungileyo inezinto ezithile "ezingalunganga", kwaye kule meko sithetha ngayo:
Sebenzisa ilungelo lokuxhamla. Ukufumana imali kukungabikho kwemisebenzi, udinga iprojekthi kwaye uzenzele amandla okuzimela; Oko kuthetha ukuba uza kuyitya le nto bakunika yona njengenzuzo kwishishini elinokuphumelela, okanye elinokuphelisa imali esele uyiqhubile (kwaye ushiyeke ungenanto).
Kukho ucalucalulo. Uxolo, kodwa kunjalo. Amadoda angaphantsi kweminyaka engama-30 ubudala, kunye nabasetyhini ukuya kuma-35 eminyaka ubudala, banokwenza i-100% yentswela-ngqesho, kodwa ngaphaya kwelo xesha banokufumana kuphela ukungabikho kwemisebenzi ngama-60%, kunye nama-40 aseleyo kukufaka isicelo sokungabikho kwemisebenzi.
Zilahlekile izibonelelo zenkxaso mali. Kungenxa yokuba, ukuba wenze impazamo kwisicelo, uhlawula impazamo ngokulahla i-40% yenkxaso ehambelana nawe.
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo kuxa ukuhlawula ukungabinamsebenzi, kuba kunokwenziwa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo:
Ukuxhasa ngemali iipesenti ezili-100, Oko kukuthi, fumana yonke imali elahlekileyo kwinzuzo yokungaphangeli kwangoko ukuxhasa ngemali utyalo-mali olufunwa lishishini.
Yenza imali kwiintlawulo zenyanga nenyanga. Le mali ke isetyenziselwa ukuhlawula umrhumo wabantu abazisebenzelayo, ngohlobo lokuba inxenye yentswela-ngqesho yakho isetyenziselwa ukuhlawula umrhumo wenyanga wokuziqesha kunye nezinye iindleko ezinokubakho.
Uyenza njani imali kwintswela-ngqesho
Ukuba emva kokufunda yonke into, kunye nokwaziswa, uthathe isigqibo sokufumana imali kukungabikho kwemisebenzi, kuya kufuneka uyazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwathabathile ukwenza oko. Kule meko, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwiNkonzo kaRhulumente yeNgqesho kaRhulumente, Oko kukuthi, iSEPE. Yiya eofisini engqinelana nawe (uhlala ubalungiselele ukuze bakwazi ukuzimasa ngaphandle kokwenza ukuba ulinde ixesha elide).
Baza kukwazisa ngentlawulo enye kwaye, ukuba bayabona ukuba ugqibe kwelokuba, kuya kufuneka gcwalisa isicelo, kwaye unamathisele ingxelo yomsebenzi oza kuwuphuhlisa, kunye notyalo-mali oza kujongana nalo. Ewe khumbula ukuba iimali ozibekayo kufuneka zingabinayo i-VAT, kuba i-VAT ayinakho ukuxhaswa.
Eyona nto inzima kakhulu kuwe kukulungiselela ingxelo yeprojekthi, kodwa kwi-Intanethi unokufumana uninzi lweetemplate zeLizwi ezinokukunceda uyenze ngokulula. Okanye, ukuba awazi, okanye awufuni kuphosakela, ungahlala uhlala Cela uncedo kumphathi okanye kumcebisi ukuyilungiselela ngokoko bakucelayo.
Nje ukuba uhambise yonke into, ukongeza kubungqina bokuba ubhalisiwe njengomntu oziqeshileyo, kwinyanga elandelayo baya kukuhlawula, ukuba yonke into ilungile, intlawulo yexesha elinye yokungaphangeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ukuphucula ukungaqeshwa